Ukuthengisa ngaphakathi kwi-ecosystem | Martech Zone
Inkqubo yokuThengisa engenayo
NgoLwesithathu, uDisemba 21, 2011 NgoLwesithathu, uDisemba 21, 2011 Douglas Karr
Ubeko lwe DK New Media ubukhulu becala yile Iarhente yentengiso engenayo. Siyalithanda igama urhwebo inbound kuba igxininisa into yokuba ukugxila kwethu kutsala izikhokelo kwaye siziguqulele kubathengi. Iinkampani ze-SEO zihlala zigxile kwinqanaba. Iinkampani zentlalontle zihlala zigxile kubaphulaphuli abakhulu. Iiarhente zihlala zigxile kuyilo. Sijonge kwiziphumo zeshishini… kwaye sinokusebenzisa i-SEO, intlalontle, i-imeyile, iselfowuni, ividiyo, uyilo okanye nasiphi na isicwangciso esiliqhubela phambili isikhokelo kunye nesikhokelela kubathengi.
Ukuthengiswa okungekho isenokuvakala ngathi Intetho yentengiso, kodwa ndiyayithanda intetho kwaye uthelekiso Isicwangciso sentengiso ephumayo. Abantu kwi Ukubonisana noVolinsky Uyile umfanekiso omkhulu obonisa imeko-bume yesicwangciso esisebenzayo sokuthengisa:
tags: urhwebo inboundintengiso yangaphakathiI-infographic yentengiso engenayoIsicwangciso sokuthengisa esingenayo
IAmazon Ithelekiswa Nehlabathi!
Umbhali wethu oQinisekisiweyo Iziphumo zoQhakamshelwano kwi-484% yokuCofa okuPhezulu
Ngomhla wama-22 ku-Disemba 2011 ngo-12: 30 PM
Ndiyayithanda le infographic! Ibetha ngokwenene isikhonkwane entloko. Kubonakala ngathi sijonga ishishini lethu ngeelensi ezimbini. Sineelensi zentengiso ezijolise kwidola esezantsi kwaye sikhokele ukuhamba kwimodeli yethu yeshishini.
Emva koko unayo le lensi "yeNtengiso yeNdalo" -eyona nto ijongeka njengokujonga okuphezulu kwefaneli-umahluko kukuba umthengisi ujolise kumanqanaba okuguqula umxholo opapashiweyo kwaye ufuna ukubeka umxholo apho uya kuba nexabiso eliphezulu . Ke senza umxholo othile onomtsalane obanzi wololeko lwangaphandle / lomoya kwaye ngokuthe ngcembe sifumana ngakumbi umxholo esiwenzayo njengoko sifunda ngakumbi ngomntu osisebenzisayo, njengoko befudukela embindini.
Yinkqubo yomlomo yale foto ibalaseleyo res Iyangqinisisa.